TimeShift: software yekudzorera iyo Linux system | Linux Vakapindwa muropa
TimeShift ndiyo system yekudzoreredza chirongwa cheLinux yakafanana neiyo Windows ine neKudzorera sarudzo kana Apple Nguva Machine yeMacOS yako. Izvo zvainogona kuita kugadzira mapfupa eiyo inoshanda sisitimu uye mafaera achiwedzera, kungave nemaoko chero patinenge tichida kana otomatiki panguva dzenguva dzese. Naizvozvo, kana mushure mekuisirwa chero kupi, kumisikidza kuchinjika, kugadzirisa, nezvimwewo, chimwe chinhu chisingachashande muhurongwa, tinogona kugara tichidzoreredza kune yakamboitika pfungwa nekuda kwezvidimbu izvi.
Iyo ine yakapusa graphical interface iyo inokutendera iwe kuti ushande nenzira yakasununguka uye inonzwisisika, ichikubvumidza iwe kuti uratidze zviratidziro, uzviite nemaoko sezvandataura, pamwe nekudzorera kune chero nzvimbo yatakatsanangura pese patinoda dzosera imwe shanduko kana kudzosera kune yapfuura vhezheni yeiyo system inoshanda. Chishandiso chakanaka chevatariri uye manejimendi eGNU / Linux sisitimu inoshanda iyo inotisunungura kubva kune inopfuura rimwe dambudziko. Naizvozvo zvakanaka kuti ive iiswe kubva ikozvino kudzivirira matambudziko emangwana. Kuti uzo kuiswa kwakoUnogona kushandisa maturusi epakeji maturusi ayo ako ekuparadzira anosanganisira uye kurodha pasi nekumisa pasuru neakavimbika ayo nenzira yakapusa nekuwedzera dura rayo, sezvo isingawanzo kuverengerwa mune zviri pamutemo. Zvichienderana nekuparadzirwa kwacho kunogona kusiyana zvishoma. Kamwe yaiswa, kubata kwayo neGUI kuri nyore, pamusoro pekupa iyo yekumisikidza wizard iyo ichatibvumidza isu kugadzirisa nzira yekutora mapikicha.
Zvichienderana nefaira system rauinaro, rinokutendera kuti ushande nechimwe kana zvimwe zvishandiso. Semuenzaniso, kana isu tine btrfs iyo TimeShift chirongwa chingaite kushandisa maficha akaiswa zvakanangana neiyi faira system kugadzira zvidhori. Kune imwe FS inozoshandisa rsync. Icho chinyorwa chinochengetwa kwatinoratidzira, uye nekuwedzera kugadzirisa kugadzirwa kwemifananidzo, tinogona kushandisa mafirita uye sarudzo dzekuisa kana kusabvisa mamwe mafaera kana madhairekitori yehurongwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » TimeShift: software yekudzorera iyo Linux system
Mhoroi Isaac. Ko TimeShift inogona kushandiswa neiyo terminal here?
Ndinokutendai zvikuru nekutevera bhurogu yedu, semubvunzo waunondibvunza, ndinoda kukuudza kuti zvinogona kuitwa! Ndinovimba ichi chinongedzo chinokubatsira iwe: http://www.teejeetech.in/2015/01/timeshift-updates-new-commandline.html
Zvido netariro ndakabatsira.
Ndakaishandisa kakati wandei mazuva ano, ndine eOS loki uye deepin, uye pandinogadzira poindi yekudzosera, mushure mekuisa mafomu kana semuenzaniso ndashandura marongero ebrowser, zvinoitika kuti kana ini ndadzorera haina isa iyo system sezvaive panguva yekugadzira iyo yekudzosera poindi, asi usati waita kudaro, kureva kuti, hapana magadzirirwo akachengetedzwa kana kwete ese maapplication aripo, saka chii chiri kushandiswa?